Xogta: wadahadal qarsoodi ah oo dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaaraha Sudan. | XAL DOON
Home NEWS Xogta: wadahadal qarsoodi ah oo dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaaraha Sudan.
Xogta: wadahadal qarsoodi ah oo dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaaraha Sudan.
Ra’iisul wasaaraha Suudaan Dr Cabdalla Xamduuk ayaa guddoomay wicitaanka Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xiriir telefoon la sameeyay si uu ula wadaago dareenka dhibaatada daadadka ku dhuftay dalkaas.
Wada sheekeesi kooban kadib, madaxweynaha JFS iyo Ra’iisul wasaaraha Suudaan waxa ay diiradda ku saareen wadahadalkooda kaalinta Soomaaliya ay ka qaadan karto samatabixinta shacabka dalkaas.
Warbaahinta Suudaan ayaa daabacday in murugada dalkaa ka jirta madaxda wadamada carabta oo uu kamid yahay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo guddoomay Ra’iisul Wasaare Cabdalla Aadam Xamduuk.
“Soomaaliya waxa ay xaaladda adag iyo murugada la wadaageysaa Walaalaha iyo Dowladda Suudaan, waan garabkiina ayaan nahay, waana ka qaybgaleynaa inta karankeena ah howlaha wax looga qabanayo musiibada” waa qayb kamid ah wadahadalka Madaxweynaha Soomaaliya & RW Suudaan xiriirka dhexmaray oo ay daabacday Warbaahinta.
Wabiga Nile biyo ka rogmaday ayaa daadad musiibo ku noqday dadka ka dhashay, waxaana ku guryo beelay dad u dhaxeeya 696 ruux ilaa 270, halka ay barakaceen dad ku dhaw 2-kun oo qofood sida ay baahisay Warbaahinta Gudaha Suudaan.
Daadadka xooggooda waxa ay ku rogmadeen Magaalada Khartuum 4-tii bishaan oo haatan laga joogo 10-Cishe, Dowladda Suudaan ayaa ku baaqday in la gaarsiiyo gurmad degdeg ah si deegaan dejin loogu sameeyo qoysaska barakacay.
Xukuumadda XIl gaarsiinta Soomaaliya ayaa 10-kii bishaan oo ku beegan Khamiistii shacab iyo ganacasataba ugu baaqday in ay gurmad siiyaan walaalaha Suudaan si loogu muujiyo garab istaag.